Daawo ''Odayaasha Digil iyo Mirifle oo Shirkii Istanbuul uga baxay sababo la xiriira Ereyga Shariif Sakiin - iftineducation.com
aadan21 / June 10, 2012
iftineducation.com – Arin khal-khal abuurtay ayaa ka dhacday dhowaan intii uu socday shirkii ururada bulshada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed uga socday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kaasoo looga hadlayey sida xal loogu heli karo xaalada Somalia.
Shirka ayaa mar kaliya sidii uu u socday waxaa ka dareeray odayaasha dhaqanka beelaha Digil iyo Mirifle oo dibeda ka joogsaday ka dib markii ay caro xoogan ka qaadeen khudbad haweeney ka tirsan bulshada rayidka ay ka jeedineysay shirka taasoo gudoomiyaha baarlamanka ugu yeertay magac ah Shariif Sakiin.
Shirkii ayaa arintaas awgeed hakad galay, in lagu kala tagana qarka u fuulay, iyadoo ergooyinkii oo dhan ay ku mashquuleen sidii ay u soo caro celin lahaayeen odayaasha beelaha Digil iyo Mirifle oo iyagu shuruud uga dhigay ku laabashada shirkaas in gabadha magacaas ku dhawaaqday laga saaro shirka.
Ka dib markii muddo saacado ah uu xayirnaa shirkaas ayaa ugu dambeyntii lagu guuleystay in ergadaas la soo caro celiyo markii lagu qanciyey balan qaad ah in ereyga Shariif sakiin mar dambe aan shirka looga dhawaaqi doonin qofkii laga maqlana shirka dibeda looga saari doono.
Shariif Sakiin ayaa ah magac dadka Soomaalida qaarkood ay naaneys uga dhigeen gudoomiyaha Baarlamanka Somalia Shariif Xasan Shiikh Aadan ka dib markii ay dhibsadeen hab dhaqankiisa siyaasadeed, waana markii ugu horeysay ee magacaas looga hor dhawaaqo shir weyn oo ay ka qeyb galayaan ergooyin boqolaal gaaraya.
Samir Nasri”Qarannka Ingiriiska Waxaan Dhan-dhansiineyaa Qaraarka Guul Darada”.